Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝ ကျေးရွာ မီးရှို့ခံရသည့် အိမ်ခြေ ၄၀ ရှိဟုဆို
ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝ ကျေးရွာ မီးရှို့ခံရသည့် အိမ်ခြေ ၄၀ ရှိဟုဆို
ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၂ ၊ YPI
ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝ ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပွားသည့် နေအိမ်မီးရှို့မှုတွင် လောင်ကျွမ်းသွားသည့် နေအိမ် အရေအတွက်မှာ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြသကဲ့သို့ ၁၂ လုံးမဟုတ်ပဲ အိမ်ခြေ ၄၀ နီးပါး ရှိသည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ ယင်းကျေးရွာသားတဦးက YPI သို့ပြောသည်။
“ဖြစ်တာက ကျောင်းဆရာဟောင်း ဥိးအေးမောင်က ရှို့တာ၊ အရှို့ခံရတဲ့ အိမ်က မောင်ဖြူရှင်းဆိုတဲ့ ရွာလယ်မှာနေသူရဲ့ အိမ်ပါ။ တဦးနဲ့ တဦးလည်း ရန်ငြိုးရန်စမရှိပါဘူး” ဟု ယင်းရွာသားက ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစဉ် ပြောပြသည်။
ယင်းအဖြစ်အပျက်ကို နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင်ဖေါ်ပြထားရာတွင် လူနေခြင်း မရှိသည့် ရွာအစွန်ရှိ နေအိမ်များကို မီးကွင်းပစ်၍ ထွက်ပြေးသွားသည်ဟု ဖေါ်ပြထားကာ မီးရှို့သူများအား ပြည်သူများ ပူးပေါင်း၍ အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု လည်း ဖေါ်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ယင်းကျေးရွာသားက မူ မီးရှို့သူ နှစ်ဦးမှာ ရွာတွင် အေးအေးဆေးဆေးပင် နေထိုင်လျှက်ရှိကြောင်း မည်သည့် ဖမ်းဆီးမှုမှ ယနေ့ ထက်ထိ မရှိကြောင်းလည်း ပြောဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်အချို့တွင် ယခုလဆန်းအတွင်းက မငြိမ်မသက်မှုများ အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နောက် လူသေဆုံးမှု၊ နေအိမ်မီးလောင်မှုများ ရှိခဲ့ရာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုထိန်း သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ် ၆ ခုကို ညမထွက်ရ အမိန့်ကြေညာခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် တခုလုံးကို အရေးပေါ် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ရသည်။
အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့ထိ သေဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၅၀ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၅၈ ဦးနှင့် လူနေအိမ် ထောင်နှင့်ချီမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ စစ်တွေမြို့တမြို့ထဲတွင်ပင် ဒုက္ခသည် သောင်းနှင့်ချီရှိသည်ဟု အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းများ အရသိရှိရသည်။ ။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 17:48
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝ ကျေးရွာ မီးရှို့ခံရသည့် အိမ်ခြေ ၄၀ ရှိဟုဆို . All Rights Reserved